GNUnet: gadzira yakachengeteka P2P network kubva kuLinux paLinux | Linux Vakapindwa muropa
GNUnet: gadzira yakachengeteka P2P network kubva kuLinux
GNUnet ichiri kurarama, sezvakaita iyo P2P (Peer-to-Peer) mafaira ekugovana netiweki havana kufa. Kunyangwe mapuratifomu akavharwa, kana zvirongwa zvakasiiwa uye zvaizivikanwa kwazvo munguva yakapfuura, idzi mhando dzekugovana zviga dzinoenderera mberi nekosi uye vashandisi vazhinji vanozvishandisa kugovana.
Con iyo GNUnet chirongwa iwe unenge uine hwaro hwekugadzira aya maratidziro enetiweki nenzira yakachengeteka. Iyo software yaive yakanyorwa muC (parizvino Python), yakavhurwa sosi, yemahara, yemahara, uye pasi peamburera yeGNU. Chinangwa ndechekushandisa chirongwa cheakagadzika P2P maratidziro, nekuchengetedzeka nekutenda kunyorera pane network network uye nzvimbo yesource.
NeGNUnet unogona kugadzira aya maratidziro, kuvimbisa kuvanzika Yevashandisi uye kubvumidza kugovaniswa kwedata, kugadzirisa netiweki pachayo, kuongorora uye kuvharira kushungurudzwa kunogona kuitika, kuvimbisa kutendeka kwedata, kugadzirisa nzvimbo dzekuwana kune P2P network, nezvimwe. Zvese izvi zvine yakaderera kushandisa zviwanikwa zvichienzaniswa nemamwe akafanana mapurojekiti.
GNUnet yakave nayo zvichangobva kugadziridzwa, uye harisi chirongwa chakafa sevamwe. Muchokwadi, pakanga paine kuwanda kukuru kwekushandisa mutauro wePython (kunze kwegnunet-qr), kushandisa mukana uyu mutauro. Shanduko idzi dzakavandudza mashandiro eprojekti iyi.
Kune izvi zvese, zvimwe teknolojia Ivo vanoshandisa chirongwa ichi sehwaro, se:
VPN system yekugadzira akavanzika masevhisi ne .gnu domain ne IPv4 / IPv6 tunnels kuburikidza neP2P.
GNU GNS mazita echizinda (DNS kutsiva), kushanda zvine mutsindo uye zvisingaite kuongorora.
Chengetedza nzvimbo dzakasarudzika dzemagariro dzichishandisa PSYC protocol ine kunyorera-kumagumo kunyorera.
Yakavanzika Yakavanzika yeemail encryption.
Asingazivikanwe GNU Taler kubhadhara system (inoshandisa yazvino mari uye inozivikanwa cryptocurrencies).
Mamwe mashoko - GNUnet Yepamutemo Webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » GNUnet: gadzira yakachengeteka P2P network kubva kuLinux
Mwenje wemwedzi: tamba yako PC vhidhiyo mitambo uri kure
Debian 11 Bullseye apinda Hard Freeze. Shanduko huru hadzisisina kutsigirwa